पौवाचित्र र बेइजिङका छ्याओ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नेवारी थाङ्काका लागि चिनियाँ बजार विशाल छ । तिब्बतले थाङ्कालाई विदेशतिर गैरभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा फैलाएको छ । नेपालबाट नेवारी पौवाचित्रलाई लिएर बेलाबेलामा प्रदर्शनी भइरहेका हुन्छन् ।
श्रावण ३२, २०७६ लक्ष्मी लम्साल
तपाईंहरू आएपछि त खुसीले गदगद भइयो’ काठमाडौं ठमेल क्षेत्रका पौवाचित्र तथा थांका व्यापारी वीरेन्द्र शाही उत्साहित भएको क्षण हामी चीनको सीसीटीभी टावरको नजिकै ‘श ली ह’ भन्ने ठाउँको एउटा ग्यालरीमा थियौं । अगस्ट १ तारिख नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउन बेइजिङस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्रमा नेपाली तथा चिनियाँ कलाकारहरूका फोटो तथा पेन्टिङहरू प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । नेपाल हस्तकला महासंघका केही पदाधिकारीहरूका बीचमा एक जना शान्त स्वभावका चिनियाँ पनि थिए । ‘यी चिनियाँ दाइले नेवारी पौवाचित्रको भव्य संग्रह गरेका छन्, हेर्न जानुभए हुन्छ नि ।’
बेइजिङ आएको सात वर्ष भैसक्दा नेपाल र नेपालीपन झल्किने तत्त्वको खोजी गरिरहेका बेला दशकदेखि नेपाली संस्कृति झल्किने यो गन्तव्य देख्न पाएको रहेनछु । शनिबारको बिदा मौलिक कलाको अध्ययनमा बिताउने प्रस्ताव राखे सहकर्मी अजय अलौकिकले । नेपालीलाई जहाँ पुगे पनि आफ्नै खानपान रहनसहन प्यारो लाग्ने । रनमिन युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत पत्रकार महेन्द्र सुवेदीले फोन गरे, ‘दाल, भात, तरकारी हातले मुछेर खान नपाएको कत्ति भयो ।’ उनको चाहना थियो, मेरो घरमा आएर नेपाली स्टाइलमा भान्सा गर्ने । मेरो योजना सुनेपछि उनले दालभात बिर्सिए र भने, ‘मलाई पनि कला पर्यटनमा लैजानुस् ।’
सन् १९७८ मा तङ स्याउ फिङले सुधार तथा खुलापनको नीति अँगाल्नुभन्दा एक दशकअघि नै चीनले बेइजिङमा सबवे प्रणालीको विकास गरिसकेको थियो । सन् १९६९ देखि आजका मितिसम्म यो एक नम्बर लाइन सबवेले पूर्वदेखि पश्चिम बेइजिङलाई जोडिरहेको छ । निरन्तर यसको लम्बाइ पनि तन्किएको तन्कियै छ । चीनको क्रान्तिकारी राजकीय चिहानस्थल अर्थात् पापाओसानबाट च्येनकोमनसम्मको १४ स्टेसन र आधा घण्टाको समय दिएपछि उनले पनि पौवा पर्यटनका लागि चाँजोपाँजो मिलाए । करिब २० देखि २५ मिटर लामा रेलमा चढ्नलाई प्लेटफर्ममा पर्खिरहेका उनको चासो थियो, यी रेलको लम्बाइ कति हुन्छ होला ?
यतिखेर नेपालमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआआई) को परियोजनाअन्तर्गत हिमालय नै काटेर काठमाडौं जाने रेलवेको परिकल्पना भैरहेको छ । नेपालमा कुद्न थालेपछि उतै नापे हुने हो रेलको लम्बाइ । त्यहाँबाट लगत्तै दुई स्टेसन पाएर पनि फेरि अर्को भूमिगत १० नम्बरको सबवे चढेर स् ली ह पुग्नु थियो । चिनियाँ ज्वाइँ बनिसकेका काठमाडौंका सुवर्ण डंगोलले नक्सा दिएका थिए, ‘जी एक्जिटबाट निस्किनू ।’ हामी नपुग्दै एउटा हस्तकला बजारको विशाल भवनको मूलढोकामै आएर चियाइरहेका रहेछन् । उनले आफ्नो हस्तकलाको पसल घुमाए । उनकी चिनियाँ श्रीमतीले नेपाली भाषामै स्वागत गरिन्, ‘नमस्ते, बस्नुस् बस्नुस् ।’
अन्तर्देशीय विवाहको धेरै वर्ष बितिसके पनि उनको तनमनचाहिं यहाँ पनि नेपाली हस्तकलाकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । छोरीको अहिले ग्रीष्म बिदा भएकाले उत्तरपूर्वी ल्याउनिङ प्रान्तको राजधानी सनयाङमा आफ्ना बाजेबज्यैसँग गएकी रहिछन् । बिदाको अवधि भएकाले यतिखेर सारा स्कुले केटाकेटीहरू ठाउँठाउँमा घुम्न गएका छन् । बच्चालाई घुमाउन भनेर कतिपय कर्मचारीहरू पनि धमाधम बिदा मिलाइरहेका छन् । सुवर्णले जीपीएस नक्सा फिट गरे । बढ्दो सहरीकरणले नजिकैको स्थानबारे पनि अचेल मानिसहरू परिचित हुन छाडे । ग्यालरी पसलबाट जम्माजम्मी १० मिनेटजति टाढा पनि रहेनछ । नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गरिरहेको कुनै चिनियाँको संग्रहालयमा उनी पनि पुगेका रहेनछन् । गज्जबै भयो, हामी तीन जना त्यता लाग्यौं । हामी आउने थाहा पाएपछि चीन भ्रमणमा आएका नेपाल हस्तकला महासंघका चारजना पदाधिकारीहरू आफ्नो पूर्वनिर्धारित योजना स्थगित गरेर बसिरहेका रहेछन् । हामीभन्दा अगाडि नै ग्यालरी पुगिसेकाका शाहीले भने, ‘नेपालीको परम्परा नै हो नि ‘भोलि’ भन्ने । त्यसैले मिटिङ पनि भोलिका लागि सारियो । परको देशमा नेपाली भेट्ने मौका पाएपछि हामीलाई पनि भोलि भन्न कुनै संकोच भएन ।’
चिनियाँले ठूलो टेबुलवरिपरि बसाएर परम्परागत चिनियाँ शैलीमा चिया टक्य्राए । त्यसपछि सुरु भयो, वैभवशाली नेवारी पौवाचित्रको अनुसन्धान । चिनियाँलाई नेवारी पौवा संकलनको अभियानमा सहयोग गरिरहेका शाहीले हलभरि सजाइएका झन्डै ५०० मध्ये केही पौवाचित्रबारे बेलिविस्तार लगाए, ‘एक जना कलाकारले वर्ष दिन कल्पनाशक्ति लगाएर एउटा चित्र तयार पार्छ । एकचोटि बनाएपछि दोहोर्‍याएर फेरि बनाउँदैन । किनकि एउटा सिर्जनापछि उसको क्षमता पूर्ण भयो । कैयन् कलाकारले एउटै चित्र दुई पटक बनाउन चाहँदैन बरु नयाँ सिर्जना गर्न खोज्छ । दुरुस्तै अर्को उतार्नाले कलाकारको सिर्जनाशक्ति समाप्त हुन्छ ।’
पौवाचित्र कोर्दै आइरहेका कलाकार रवीन्द्र शाक्य पनि सँगै थिए । उनले उदाहरण थिए, ‘१० जना युवतीमा एक जना मात्रै कसरी सबैभन्दा सुन्दरी भनेर छानिन्छ ? हो त्यस्तै हो चित्रकारले उस्तै ब्रह्मदृष्टि लगाएर उत्कृष्ट कला सिर्जना गरेपछि बाँकीलाई पनि उस्तै सुन्दरको उपमा दिन सक्दैन ।’एक जना सुकुमारी युवती स्वरूपकी देवी भित्तामा झुन्डिएकी थिइन् । उनका परेलीका ओठबाट आँसु झर्न मात्रै बाँकी । चिनियाँ कलाकारले भगवान्को आभूषण लगाएर आधुनिक युवतीको अनुहार बनाएका थिए । नेपाली चित्रकलामा काल्पनिक भगवान्लाई सिर्जनाको केन्द्रमा राखिन्छ तर चिनियाँले प्राचीनता र आधुनिकताको ‘फ्युजन’ गरिदिएछन् ।
भित्तामा महँगा फ्रेमभित्र पुनारा चित्रहरू पनि थिए । नेपालमा कम महत्त्व दिएर बेवास्ता गरिएका खजाना यी चिनियाँका संग्रहालयमा संरक्षित थिए । बेइजिङ राजकुमारी श्वेततारा र नेपाली राजकुमारी हरिततारा (भृकुटी), कुबेर, हिन्दु देवीदेवता र बुद्धका अनेकन मुद्राहरू समेटिएका गहकिला पौवाचित्र देखाउँदै गए । पहिला पहिला भगवान्को मूर्त स्वरूप थिएन र मानिसहरूले कल्पना गर्न सक्थे । तर भागदौडको यो जमानामा मानिसलाई गहिरिएर चित्रको अध्ययन गर्ने समय छैन । तसर्थ आधुनिकता र नवीन तत्त्वहरू थपिँदै गएको चित्रहरूमा देख्न सकिन्थ्यो । नेवारी थाङ्काका लागि चिनियाँ बजार विशाल छ । तिब्बतले थाङ्कालाई विदेशतिर गैरभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा फैलाएको छ । नेपालबाट नेवारी पौवाचित्रलाई लिएर बेलाबेलामा प्रदर्शनी भैरहेका हुन्छन् । चीन नेपाल सम्बन्ध कसरी बढाउने भनेर वर्षौंदेखि लागिरहेको बताउँदै नेपाल हस्तकला महासङ्घका कार्यकारी सदस्य जीवनरत्न शाक्यले भने, ‘हेर्दाहेर्दै आँखै अगाडि चीन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हामीले पाएको सुविधा पनि प्रयोग गर्न सकेनौं ।’
चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा बढी चीजवस्तुहरूमा निःशुल्क भन्सार सुविधा दिएको छ । तर नेपालबाट कमै मात्र वस्तु चीन भित्रिरहेका छन् । पौवाचित्रको प्रदर्शनी हेरिसकेपछि पुनः एउटा ठूलो टेबुलको वरिपरि नेवारी थाङ्काको भविष्यका बारेमा चिन्तन मनन सुरु हुँदै थियो । तुरुन्तै हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्यले थपिहाले, ‘प्रक्रिया नजानेर धेरैले नेपाली थाङ्का चित्रहरू भन्सार तिरेर ल्याइरहेका छन् । निःशुल्क भन्सारको सुविधा नै लिन सकिरहेका छैनन् ।’ नेपाली कला संस्कृतिलाई सङ्कलन गरेर चीन ल्याउने चिनियाँ अरू भेटिएको छैन । उनको कामले एउटा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको शाक्यले भने । छिट्टै नै नेपाल चीन सांस्कृतिक सम्बन्धबारे संस्था खोलेरै बृहत् रूपमा लाग्ने सोचमा उनी लाग्न थाले । मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि विदेशमा रहेका हरेक नेपाली निकाय, दूतावासहरूमा नेपाली कला वस्तु राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला चीनस्थित दूतावासले त्यो कामलाई तीव्रता देओस् भनेर हामीले दूतावासका अधिकारीहरूलाई भनेका छौं ।’
कुनै पनि देशसँग व्यापार र नाफा–घाटाको कुरा मात्रै होइन, सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि ठूलो सम्पत्ति हो । देशले गर्न नसकेको सांस्कृतिक प्रचार जनताको सानो प्रयासबाट पनि बृहत् बन्न सक्छ । नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानको घाटा कम गर्नका लागि व्यक्तिगत पहल पनि ठूलो व्यापार नाफा नै हो । चीनमा नेपालसम्बन्धी सांस्कृतिक आदानप्रदानका कुराहरू बढ्दै गएका छन् । चीनभित्र इतिहासकालदेखिका सम्पदाहरू जगेर्ना भएको देख्न सकिन्छ । चीनमा नेपाल खोज्नुपर्‍यो भने भृकुटी, अरनिको, रञ्जना लिपि, स्तूपदेखि अनेक कुरा भेट्न सकिन्छ । नेपालमा चीन खोज्ने हो भने के–के कुरा इतिहासकालदेखि साँचिएका होलान् ? उमेरले ५ दशक पार गरेका छ्याओ क्वो चिन सन् २०१२ देखि बारम्बार नेपाल पुगेका रहेछन् । उनलाई नेवारी थाङ्काले भुतुक्कै बनाएछ । त्यसैले नेवारी वैभव चिनियाँमाझ देखाउने ध्येयले संग्रह गर्दै रहेछन् । उनको संग्रहालयमा अमूल्य थाङ्काहरू छन्, जो चिनियाँमाझ नेपाली पौवा र थाङ्काको शक्ति देखाउनु रहेछ । सानोमा स्कुलमा चित्र कोरे यता उनको हातले कहिल्यै चित्र कोरेको रहेनछ । बेइजिङमा रहेका नेपालीलाई गर्व गर्नलायक गन्तव्यको तयारीमा जुटिरहेका उनले अर्को बृहत् परियोजनाबारे पनि सुनाए । करिब एक डेढ वर्षको अन्तरालमा खुल्ने गरी एउटा नेपाली पहिचानस्थलको तयारीमा रहेछन् उनी । जहाँ नेपाली संगीत सुन्न सकिनेछ, नेपाली नृत्य देखिनेछ र नेपाली खानेकुरा चाख्न सकिनेछ । मियुन जिल्लाको फङच्यायुमा उनको यो परियोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको रहेछ । ‘नेपाली कला संस्कृतिको बारेमा अलिकति जानकारी पाएपछि धेरै चिनियाँहरू नेपाल जानेछन्,’ उनी अपेक्षाभावी भए ।
नेपालप्रति उनको सद्भाव चुलिँदै गएको परिणाम हो, उनले बेलाबेलामा नेपाल सम्बन्धित गतिविधि गरिरहँदा रहेछन् । गत वर्ष नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्धको ६३औं वार्षिकोत्सवका बेला उनले बेइजिङमै नेपाली खाना महोत्सवको संयोजन गरेका रहेछन् । चीनको राजकीय होटलमा भएको सो महोत्सवमा खाना खाएपछि जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले ‘चिकेन करी’ को खुलेर तारिफ गरेका थिए । नेपालप्रतिको यो हार्दिकता दिगो बनाइराख्न ‘छ्याओ दाजु’ सदैव नेपालको कला संस्कृतिमा चुर्लुम्म डुबिरहन चाहन्छन् । नेपालमा २०७२ को भूकम्पमा उनी मानवीयताको छाती लिएर सकेको सहयोग गरेर फर्किएका रहेछन् । नेपालप्रति उनको सदाशयता झन्–झन् गहिरो बन्दै गएको रहेछ । फर्किने बेलामा छेवैमा भएकी अर्धाङ्गिनीलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘तिमीहरूको भाउजूले खुब मीठो खाना पकाउँछिन् । बेलाबेलामा आउँदै गर्नू, हामी एउटै परिवारको दाजुभाइजस्तो हो नि ।’
लेखक ः चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, बेइजिङमा कार्यरत छन् । प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ १०:१८
देशमा युद्धको सन्त्रास बढेपछि, एक घर एक पाखुरी चन्दा भर्ती तीव्र हुन थालेपछि एकएक गरेर गरेर रित्तिन थालेको गाउँ फेरि बौरिन सकेन । हाम्रा गाउँहरूलाई बौराउन आवश्यक छ कि छैन ? त्यसको सम्भावना नै छ कि छैन ?
श्रावण ३२, २०७६ यादव देवकोटा
काँधमा हलो, जुवा, साहा बोकेर मोला लगाएका गोरु धपाउँदै एकमाथि अर्को गर्दै खप्टिएका छानाजस्ता खेतका गह्राहरू ताकेर लाम लागेका मौरी किसानहरू । बाउसे गरेर सम्याएको रोपो गाड्नुअघिको हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका तन्नेरीहरूको कोकोहोलो । आफ्नो खेत पहिले रोप्न पानीको मूल एकोहोर्‍याउन घुम ओढेर खेतको डिलमा उभिएर एकअर्कासँग पाखुरा सुर्किरहेका खेतवालाहरू । खडेरी उतर्सिएर गाभो गाड्न नपाएपछि उदासिएका किसानहरू । अविरल वर्षापछि खेतका आली नाघ्दै छङछङ गर्दै निस्किएको पानीको छाँगो ।
बीस वर्षपछि तपाईं फेरि उभिनुभएको छ, उही गाउँमा भने–दृश्य बदलिएको मात्रै छैन, कायापलट भएको छ । जस्तो, अहिले म गोर्खाको पन्द्रुङमा उभिएको छु, यो बयानलाई जोड्न । यो गाउँको नाम तपार्इं पहिलोपल्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने, तपार्इंलाई नमीठो सम्झना दिलाऊँ– केही मानिसको सत्ता र भत्ताको उम्मिदलाई थाक्रो हाल्न देशलाई युद्धको खेलमा होम्दा सबैभन्दा पहिले पोखिएको रगत यही गाउँको थियो । हामीसँगै खेलेर, जुधेर, पढेर हुर्किरहेको दँवाली दिलबहादुर रम्तेललाई स्कुल गएकै दिन ढालेपछि खोलिएको हिंसाको चक्र यो देशका सत्र हजार मानिसको ज्यान लिएर थामियो । हो, यही गाउँको यो दृष्टान्त, तपाईंका तमाम गाउँसँग पनि मिल्यो भने यो संयोग मात्रै हुने छैन, नेपाली समाजको वर्तमान नियतिको साझा चित्र हुनेछ । आज टाढाको सिम्लेखेतको त बेग्लै कुरा, गैह्रीखेतमै गाभो गाड्ने बलिया पाखुराहरू गाउँबाट गायब छन् । ती परदेशका एकान्त कोठा या सहरको रमझममा पनि मनभरि ऐठन रोपेर बसेका छन् । गाउँ बिस्तारै सहर ‘गन्हाउने’ बूढा बाआमाहरूको जिन्दगी अड्याउने एकान्तमा बदलिएको छ । ट्याक्टरहरू सकीनसकी मोटा चामल ‘लोड’ गरेर गाउँ ताकेर बत्तिएका छन् । भकारी र कुन्युबाट धान, मकै गायब भएर कोठामा बेसाहा चामल रित्याएको राता, पहेंला बोराको चाङ लाग्न थालेको छ । गुजारामुखी कृषि कर्मबाट गाउँ परनिर्भर बेसाहाको आडभरोसामा अडिएको छ । अभर पर्दा बल दिने पाखुरा गाउँमा देखियो भने त्यो महाआश्चर्य हुनेछ । किन गाउँमै बसेको भनेर सोध्नुभयो भने, तन्नेरीभन्दा अघि नै उनका अभिभावकले गुनासो पोख्नेछन्— खै त नि सबै विदेश गएका छन्, उन्नति गरेका छन्, यही मात्रै त्यसै पोखिएर यतै हराएको छ ।
सदरमुकामतिर या तैबिसेक सजिलो खोज्न गाउँको गुजारामुखी कृषिकर्म त्यागेर निस्किएको तन्नेरी सहर पसेर पनि गुजाराको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । या गुजारमुखी कृषिबाट जिन्दगी उज्यालिन नसकेको विकासे निष्कर्षको पछि लागेर अरब भासिएको तन्नेरीले सिंगै जिन्दगी उतै बालुवा चाल्न लगाएपछिको निष्कर्ष पनि गुजारामै निख्रिएको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । गाउँ रित्याएर निस्किएको त्यो सलहको हूलजस्तो पदचाप आज पनि जिन्दगीको गुजारामै रल्लिएको छ । फरक त्यति मात्रै हो, गाउँको गुजारा भने आफ्नै रस निचोरेर चल्न छोडेको छ । भयानक युद्धको त्रासदीपछि सन्नाटामा बदलिएको वस्तीजस्तो धिपधिपे श्वास अड्याएर जेनतेन चलिरहेको छ यसको गति । देशमा युद्धको सन्त्रास बढेपछि, एक घर एक पाखुरी चन्दा भर्ती तीव्र हुन थालेपछि एकएक गरेर गरेर रित्तिन थालेको गाउँ फेरि बौरिन सकेन । अलिकति जमिन भएका र साहुले ऋण पत्याउनेहरूले बेलैमा अरबको बाटो तताए । नेपाली समाजमा मुठीभर मानिसहरू छाडेर अधिकांशमा परिवारको गुजारा चल्नेभन्दा बाहेकको जमिन लोकहितका लागि परोपकारी कर्ममा खर्च गर्ने, गुठी राखेर लौकिक कर्ममा लगाउने परिपाटी निकै लामो समयदेखि रहिआएकाले त्यही गुजाराको जमिनको आकारका आधारमा ऋण पाउने तय हुन्थ्यो । अधिकांश परिवारसँग गुजारा चल्ने जमिन पनि नहुने अवस्था आयो महेन्द्रकालीन जग्गा दर्ता ऐनको अभियान अघि बढेपछि । ऋण लिन नसक्नेहरू कालापारमा पाखुरा बजार्न पुगे । त्यही पनि नसक्ने र कुनै उपाय नहुनेहरू जेनतेन पहाडमै रोकिए । कालान्तरमा ती पनि एकपछि अर्को गर्दै अरबमा पाखुरा बजार्न पुगे । जमिनको अलिक ठूलो हिस्सा ओगटेर गरेर बसेकाहरूका सन्तान पहिलो विश्व भनिने खासमा पुँजीवादी विकासको अखडाका रूपमा चिनिने देशहरूमा पुगे । त्यसरी अमेरिका, युरोपजस्ता देशहरूमा जानेमा धेरैजस्तो सहरमा घर भएका या गाउँमै पनि तुलनात्मक तवरले अलिक सजिलोसँग बाँच्न पुग्ने आयस्था भएका परिवारका मानिसहरू भए ।
फर्किएर गम्भीरतापूर्वक हेरियो भने माओवादी दसवर्षे युद्धले नेपाली समाजको संरचना तहसनहस बनाइदिएको छ । त्यसले खराब मात्रै गरेको छैन । परम्परागत संरचनाको उलटफेरपछि विकसित हुन गएको पलायन, बसाइसराइ, विस्थापनको परिणाममा छुवाछूत, भेदभावको संकथनहरू बदलिएको छ । ग्रामीण जमिनमा आधारित जमिनदारी हैसियत विघटन भएको छ र पैसामा आधारित नयाँ हैकमको संरचना र त्यसैमा आधारित शोषण र विभेदको नयाँ शृंखला तीव्र भएको छ । न्यायपूर्ण समाज र समानताको नारा भट्याएर मानिसलाई मृत्युको ‘म्यारथन’ मा दौडाएका नेताहरू आज आफूसँग जम्मा भएको पैसाको तागतमा आफू तलको विशाल पंक्तिलाई कज्याएर बसिरहेको छ ।
पैसा नै प्रमुख सवाल भएर आइदिएपछि त्यसैको जोहोका लागि अरब गएको तन्नेरी उतैबाट सहरको लती भयो । पहाडका गाउँ रित्तिएपछि मैदानी भेगका धान फल्ने गह्राहरू मासिए । अटेसमटेस गरेर कक्षाकोठा भरिभराउ हुने विद्यालयहरू विद्यार्थी नै नपाएपछि ग्राहक नपाएर मर्जरमा गएको बैंकजस्तै गाभिन थालेका छन् । मेरै गाउँको विद्यालय चारबाट झरेर एकमा आइपुगेको छ । त्यही विद्यालय पनि विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने हालतमा छ । र, गाउँको यो दुर्दशा हरबखत सहरमा बसेर फलाकिरहेको हुन्छु । हामी सबैलाई सहर, सुविधा, सहज चाहिएको छ । गाउँ भने अरू कोही बसिदिएर गुल्जार बनाइराखिदिए हुन्थ्यो भन्ने लालसा छ । सबै गडबड यहींनेर भएको छ । तर, योभन्दा पनि ठूलो गडबड भने हाम्रो केन्द्रीकृत चेतना निर्माणको लामो कसरतमा भएको छ ।
मैदानी भेगबाट पराजय, असुविधासहित पहाडी भेगतिर बत्तिएका हाम्रा अग्रजहरूले अग्ला पहाडका सोतो परेका पाखाहरूलाई आफ्नो मुकाम बनाएको देखिन्छ । पानीको मुहानलाई केन्द्र बनाएर बसाइएका त्यस्ता बस्तीहरू स्वाभाविक तवरले त्यसरी बस्न गएकाहरूको परिवार वृद्धिसँगै गुल्जार हुन गयो । मैदानी भेगमा लामो समयसम्म विद्यमान औलोजस्ता अनेकन सरुवा र ज्यानमारा रोगको त्रासका कारण मानिसको रोजाइ पहाडी पाखाहरू भए । युद्ध र सम्पत्ति हडप्न गरिने लडाइँका कारण अग्ला पहाडहरू सुरक्षित थलोका रूपमा रोजिए । त्यहीँ टाठाबाठाहरूले विशाल पाखापखेरा कज्याए । तिनै जमिनदारहरूले निश्चित शिल्पी समुदायलाई आफ्नो भरोसामा बाँच्ने मानिसका रूपमा आफ्नो बस्तीको छेउमा अड्याए । नेपाली पहाडी बस्तीको सन्दर्भमा खस राज्यको फैलावट र विघटनको क्रम तीव्र भएसँगै सिञ्जा उपत्यकालाई केन्द्र मानेर थातथलो जोडेका बासिन्दाहरूको त्यहाँबाट फैलावट र पलायनको क्रम तीव्रत्तर रूपमा अघि बढ्यो । आज सिञ्जा पूर्वका पहाडी बस्तीका अधिकांश ब्राह्मण, क्षत्री, ‘दलित’ हरूसँग (जनजातिबाहेक) को साक्षात्कारमा उनीहरूको पुर्ख्यौली थलो सोधियो भने त्यसको निष्कर्ष तत्कालीन खस साम्राज्यका पहाडी भित्ताहरूमा गएर ठोकिन्छ । पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा सञ्चालित गोर्खा राज्य विस्तार अभियानमा त्यस्ता पश्चिमेली पहाडी बासिन्दाहरूको तीव्रत्तर फैलावट गोर्खाको सीमा नाघेर पूर्वी पहाडी इलाकाहरूसम्म पुग्यो । यद्यपि त्यसअघि नै पनि पूर्वी पहाडमा पश्चिमेली खसानका बासिन्दाहरू खस राज्यको विस्तारका क्रममै पुगिसकेका थिए । त्यसलाई गोर्खा राज्यको आक्रामक फैलावटको क्रमले गतिशील बनाइदिएको थियो । खस र गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रम अघि पहाडी भेगका भिराला पाखाहरूमा थकाली, तमू (गुरुङ), तामाङ, मगर, चेपाङ, राउटे, राई, लिम्बूजस्ता किराँत (?) जाति/भाषा सम्बद्ध समुदायले आवाद गुल्जार गराएका थिए । (ती जातिहरू कहिले, कहाँबाट नेपाली पहाडी भेगमा पाखा आवाद गराउन आइपुगे भन्ने बयान गर्न अर्को बेग्लै शीर्षकको लेख आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले त्यता नलागौं ।) निश्चित भूगोलमा एउटा सजातीय परिवारको किलो गाडिएपछि र त्यसको विस्तार हुन थालेपछि सामाजिक अगुवाका रूपमा थकु, नायकहरू थापिन थाले । सामाजिक संरचनामा अन्य जातीय प्रवेशसँगै त्यसले रैथाने सामन्तको रूप लिँदै क्रमशः राज्य र राज्यप्रमुखको नाम पाउन थाल्यो । टुहुरे स्तरका भए पनि त्यस्ता राज्य प्रमुखहरू कालान्तरमा राजा भनिए ।
अरूभन्दा फरक र विशेष देखिन शासकहरूले सर्वसाधारणको भन्दा विशेष ठाउँमा जनश्रमदान गराएर विशेष भवन बनाउने काम गरे । तिनी बस्ने भवन राजदरबार भनियो । दरबार रहेको ठाउँ राजधानी । स्वाभाविक तवरले शासकको दरबार या मुकाम रहेको स्थानलाई केन्द्र बनाएर उपलब्ध हुन सक्ने तमाम सुविधाहरू संकेन्द्रित गरिए । त्यसरी सुविधाहरू संकेन्द्रित गरिएपछि त्यस्ता स्थानहरू स्वतः तलका मानिसहरूको आकर्षण र स्वप्न स्थलको रूपमा परिणत भए । हरेकले तिनै मुकामहरूको वरिपरि आफ्नो थलो, किलो गाड्न सक्नुलाई जीवनको, सफलताको ध्येय बनाउन थाले । यो केन्द्रीकृत चेतना निर्माणको लामो सिलसिलाले डामिएर आएको समाजलाई पछिल्ला दिनहरूमा आँधीको गतिमा विस्तारित पुँजीवादको फैलावटले उत्पादकबाट तानेर उपभोक्ताको एकाइमा मात्रै सोच्न, बाँच्न सक्ने गरी विद्रूपीकरण गरिदियो । पाखुरा बजारेर उत्पादन गरिएको जैविक खाद्यान्नको मूल्यले विषादी प्रयोग गरेर उत्पादित आयातित खाद्यान्नसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । करेसामा तरकारी लगाउनुभन्दा दोबाटोको खाद्यान्न पसलबाट ‘बेसाहा’ ओसार्नु सस्तो भयो । उसै पनि तागतदार पाखुरीहरूको पलायनपछि उत्पादनको गति वेगवान गतिमा दौडिरहेको सवारीमा लगाएको ‘ब्रेक’ पछिको अवस्थाजस्तै हुन गयो ।
स्वास्थ्य र बजार निर्भर जिन्दगीमा अभ्यस्त हुन गएको जनजीविकाले मानिसलाई घना सहरी बस्तीतिर आकर्षित गरिदिएको छ । गाउँमा सम्भवतः कुनै अकल्पनीय उलटफेर नभएमा आखिरी पुस्ता मात्रै अडिएको छ । त्यो पनि पुर्खाको थलो नछोड्ने, सहर गन्हाउने, सहरको पानी नमीठो हुने अनेक बहानाको च्यादर ओढेर गाउँमा अडिएको छ । नत्र, अवसर, सुविधाको खोजीमा आफू जन्मिएको ठाउँभन्दा अलिक फराकिलो परिवेशमा पुगेको अनुभूत गरेको मानिस फर्किएर फेरि खुम्चन जाने सम्भावना देखिंदैन । हाम्रो पुस्ता भने ग्रामीण लयको एउटा अनुभूति र सहरिया जीवनको आकर्षणको बीचमा फँसेर बेलाबखत गाउँ सम्झेर भावुक निबन्ध लेखिबस्ने स्तरमा विघटित भएको छ । उसै पनि जुन ठाउँमा मानिस बस्दैन, खेल्दैन, बसे पनि मुहारबाट हाँसो गायब छ, त्यो ठाउँ जतिसुकै सुन्दर भए पनि अर्थहीन बनिदिएको छ, मानिसका आवश्यकता, सुविधा, लालसाले ।
पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा अनेकन रैथाने केन्द्रका रूपमा क्रियाशील राज्य, रजौटाहरूलाई विस्तारित गोर्खा राज्यको केन्द्रमा लपेटेपछि नेपाली समाजमा एकल केन्द्रीय सत्ता चेतनाको विकास भएर आयो । मानिसहरूसँग केन्द्रीकृत हुनका लागि देशको राजधानी काठमाडौं सबैभन्दा प्रमुख आकर्षणको अड्डाका रूपमा रहन गयो । पृथ्वीनारायणले नै काठमाडौंमा गोर्खाली विजयको झन्डा गाडेपछि यहाँको जमिन गोर्खाली भारदारहरूलाई बाँड्ने काम सुरु गरे । पछिका दिनमा त्यसको देखासिकीको मात्रा तीव्रत्तर हुन गयो । काठमाडौंमा आउनु र यहाँको जमिनको स्वामित्वमा आफ्नो नाम लेखाउनु मानिसहरूको सामर्थ्य, अहंको प्रदर्शनजस्तो हुन गयो । त्यसको गति विसं २००७ साल यता र अझ खासमा विसं २०२० पछि यति तीव्र भयो कि काठमाडौंको उब्जाउ जमिनमा जमिनभित्र पानी समेत छिर्ने ठाउँ बाँकी नराखी कंक्रिटका भवनहरू रोपिए । काठमाडौं वरपरका डाँडाकाँडाहरूमा समेत सामर्थ्य लगाउन नसक्नेहरू मैदानी भेगका मलिला खेतीयोग्य जमिनलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउनेमा दरिए । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर उभिएका बस्तीहरूले बितेको पच्चीस वर्षभित्र भीमकाय सहरको स्वरूप ग्रहण गर्दै जानु र त्यही अनुपातमा भिराला पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिने मात्रै होइन मैदानी भेगकै भित्री गाउँहरू उपेक्षित हुँदै जानु हाम्रो समाजमा कमसेकम २ सय ५० वर्ष लामो केन्द्रीकृत सत्ता अभ्यासले निर्माण गरेको चेतनाको प्रतिविम्ब हो । तर, यति मात्रै भनेर हाम्रो एकीकृत या केन्द्रीकृत खालको चेतना निमार्णका सन्दर्भहरू निम्टिँदैनन् ।
फर्केर मानव सभ्यता विकासको निकै लामो इतिहास मिहिन तवरले निफन्ने हो भने, मानव समुदाय एउटा निश्चित ठाउँलाई केन्द्र बनाएर त्यसैको वरिपरि झुम्मिने सामूहिक चेतनाबाट अभिसारित भएको पाइन्छ । मानिस मात्रै नभई अन्य जनावरहरूमा समेत सामूहिकता र केन्द्रीकरणको अभ्यास रहेको देख्न सकिन्छ । एउटा भूगोललाई केन्द्र बनाएर अडिने र त्यसभन्दा उन्नत विकल्पका लागि प्रयत्नहरू क्रियाशील गराइराख्ने अभ्यासबाट मानव समाज अघि बढ्यो । त्यही क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा मानिसहरूको बसाइसराइ र फैलावट जारी रह्यो । आजको दिनमा समेत पैदल पार गर्न अकल्पनीय मानिएका विशाल समुद्री फेरोहरू हिउँदमा पानी जमेर बरफ बनेको समयमा पैदलै नापेर नाघिभ्याउने मानव समाजको प्राचीन प्रयास त्यही सहजता र सुविधाको खोजीका लागि प्रयत्नहरू क्रियाशील गराउने कर्मकै हिस्सा थियो । जिन्दगी र आफ्ना सन्ततिको सहजताका लागि अधिकतम मिहिनेत गर्ने र त्यसबाट पनि कठिनाइको मात्रा नघट्ने देखिएपछि पुस्तौंपुस्ताको जिन्दगी र समय लगानी गरेर सिर्जित र विकसित थातथलो छाडेर नयाँ विकल्पको बाटोमा अगाडि बढिरहने मानव समाजको अभ्यासको चिन्तनस्वरूप आज पनि मानिसहरू एक ठाउँमा जमेर नबस्ने र विकल्पहरूका लागि भौंतारिइरहने प्रयास अकण्टक जारी छ । मेरै गाउँमा मेरा पितामह रविलाल देवकाटाले जग बसाएको सय वर्ष हाराहारीमा त्यहाँबाट उहाँका सन्ततिहरू तितरबितर भैसकेको अवस्था छ । यस्तै सन्दर्भहरू तपाईं अनेकका परिवारहरूको अन्तर्यसँग पनि मिल्ला । कसैको केही लामो होला, कसैको छोटो । कसैको जरोकिलोको इतिहास तीन सय वर्ष नाघ्ला, कसैको इतिहास आजको थलोभन्दा पारिको भित्तामा पुगे थप डेढ सय वर्ष जोडिएला । यसले पनि हाम्रा पुर्खाहरू निरन्तर सहज र तैबिसेक सुविधाजनक स्थानको खेजीमा निरन्तर सर्दै, चर्दै हिँडिरहेका थिए र हामीले पुर्खाहरूको त्यही चरित्रलाई अनुसरण मात्रै गरिरहेको देखिन्छ । एक्लो बसाइबाट सामूहिक बसाइमा जाने, सानो समूह अलिक ठूलो समूहमा मिसिने र एउटा विशाल समूहमा फैलने र कालान्तरमा फेरि विभाजित भएर तितरबितर हुने मानव समाज विकासको चरित्रगत निरन्तरता आज पनि जारी छ । स्वाभाविक तवरले आज पनि मानिस सहजता र सुविधाको खोजीमा सानो गाउँबाट अलिक सहरोन्मुख बस्तीमा बसाइ सरिरहेको छ ।
सहरोन्मुख बस्तीबाट फस्टाउँदो सहरमा, त्यहाँबाट अझै ठूला र स्थापित सहरमा जान र त्यहाँ स्थापित हुन प्रयास गर्ने क्रमकै परिणाममा आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बजार, अवसर, सुविधाका हिसाबले सीमान्त गाउँहरूबाट हैसियतअनुसारका सहर या मैदानी भूगोलमा बसाइसराइको क्रम तीव्रत्तर भएको छ । त्यसैको उत्कर्षमा गाउँहरू खाली भैरहेको छ । यो स्वाभाविक पनि छ, मानव इतिहासको क्रमिक विकासको परम्पराको चिन्तन हस्तान्तरण र अनुकरणको हिसाबले । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनजस्ता सूत्रहरूको हिसाबले भने यही ग्रामीण भेगमा विकसित भइरहेको रित्तोपना र उर्वर जमिनमा तीव्रत्तर हुँदै गएको कंक्रिटका भवन उमार्ने होडले नेपाली समाजलाई पूर्णतः परनिर्भरताको हिरासतमा कैदी बनाइदिएको छ । यो क्रम अझैं बढेर जानेछ । सरकारी तथ्यांकलाई नै मान्ने हो भने पनि गएको वर्ष मात्रै हामीले ५२ अर्ब रकमको खाद्यान्न आयात गर्‍यौं ।
पहाडी भेगको विशाल जमिन बाँझिंँदै जाने र मैदानी भेगको विशाल खेतीयोग्य जमिन सहजताको खोजीमा बसाइसराइमा लागेका मानिसहरूको ओत बन्ने क्रममा खण्डीकरण भएर बस्तीमा परिणत हुने दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसको विकल्पमा पहाडका विभिन्न स्थानहरूमा व्यवस्थित बस्ती बसाउने र उक्त बस्तीका लागि चाहिने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगारी, उत्पादन–वितरण–बजार, मनोरञ्जन, मौलिकताको व्यवस्था गर्ने र वरपरका जमिनमा सहज कृषि उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजना नबनाउने हो भने न गाउँ नै गुल्जार हुन्छ न त देशले निश्चित सहरी क्षेत्रमा उर्लंदो केन्द्रीकरणलाई नै थेग्न सक्छ । तर, शासकहरूलाई भने सस्ता टुक्का, हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज दौडाउने बेतुकको गफबाट नेपाली समाजले झेलिरहेको समस्यामा केन्द्रित हुने फुर्सद नै छैन । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नै बुतामा तयार गरेको प्रक्रियागत विकासे योजना नेपाली समाजले पालेको लालसाको लप्कोलाई बुझाउन सक्ने हैसियतमै देखिन्न ।
राज्यको पुनःसंरचना र संघीयतापछि केन्द्रीकृत राज्य संरचना विघटन हुने र मानिसहरू बिस्तारै सहरमुखी चिन्तनबाट ग्रामीण बस्तीतिर फर्कने अनुमान पनि नवगठित संघीय एकाइहरूको परम्परागत चरित्रका कारण गलत सावित भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार लैजाने भन्नुको अर्थ सुविधाहरूको स्थानीयकरण गर्ने भन्ने हुनुपर्नेमा गाउँगाउँमा नयाँ हैकमी शासकहरूको बिगबिगी बढेको छ । मनोमानी र आर्थिक अनुशासनहीनताले स्थानीय तह नयाँ भ्रष्टहरूको उत्पादन कारखानामा बदलिने खतरा देखिएको छ । संघीयताको मर्म र मान्यताविपरीत कतिपय अधिकारहरू स्थानीय निकाय, जिल्लाबाट खोसेर झन् टाढा पुर्‍याउन थालिएको छ । स्थानीय सरकार ग्रामीण मानिसलाई रोजगारमूलक कामका नाममा सेलरोटी पकाउने तालिम दिएर बसेको छ । यसले मानिसहरूलाई ग्रामीण भेगतर्फ आकर्षित गर्ने कुनै पहल गर्न सकेको छैन । विकासका नाममा भिराला पाखाहरूमा डोजर चलाउनेदेखि डोजर चलाउनेसम्मका कामबाहेक थप प्राथमिकतामा परेकै छैन । अस्पताल, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, आवश्यक बजारको प्रबन्ध, रोजगारीको दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्ने आधार निर्माणमा गरिने लगानी तलदेखि माथिसम्मका शासकहरूलाई अनुत्पादक खर्च लाग्छ ।
यी तमाम कारणहरू विघटित भएको गाउँको गति फेरि बौराउन व्यवस्थित बस्ती बसाल्नेदेखि, आधारभूत सुविधाहरू संकेन्द्रित गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिए पूर्व पश्चिमसम्म फैलिएको मध्यपहाडी भेग अबको केही दशकभित्रै मानवरहित पाखाहरूमा परिणत हुनेछ । बदलिँदो समयमा गाउँले विकल्प नदिएपछि सुविधाको खोजीमा गाउँ छोडेर सहर सर्ने मानव समाजको नियमित अभ्यास नै देखिन्छ विश्वभर नै । देहातका गाउँहरू नै पनि खुम्चने र राजमार्ग वरपरका बस्तीहरूमा थामिनसक्नुको चाप बढ्नुको कारण पनि त्यही नै हो । तसर्थ, हाम्रा गाउँहरूलाई फेरि बौराउन आवश्यक छ कि छैन ? त्यसको सम्भावना नै छ कि छैन ? छ भने हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे विमर्श थाल्न ढिला भयो कि !
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ११:०७